FAAHFAAHIN: Akhri Qodobadii ay ku heshiiyeen Puntland iyo Soomaaliya – Radio Daljir
Abriil 12, 2015 5:20 b 0
Axad, Abriil 12, 2015 (Daljir) — Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Puntland ayaa maanta magaalada Garowe ku kala saxiixday heshiis ka kooban todobo qodob ka dib wada hadalo labadii maalin ee ugu danbeysay uga socday magaalada Garowe ee caasimadda Puntland.
Hoos ka Aqri heshiska.
1: Fulinta iyo hirgalinta heshiisyadii hore loo galay.
Dowladda Federaalka iyo dowladda Puntland waxa ay isku afgarteen hirgalinta heshiiyadii horey ay labada dhinac u wada gaareem oo uu ugu danbeeyay heshiikii la wada galay 14-kii bishii octobar ee sanadkii hore ,si arintaas loo gaaro waxaa la magacaabay guddi isku dhaf ah oo ka shaqeeya hirgalinta heshiisyadaas,waxaana la soo dhaweeyay wixii ka qabsoomay heshiisyadii la galay.
2: Shuruucda ay dowladda Federaalka ah soo saarto iyo samaynta guddiyada heer Qaran.
Waxaa la isku raacay in dowladaha xubnaha ka ah \_\_\_\_lagala tashado xeerarka uu ansixiyo barlamaanka Soomaaliya iyo dhismaha guddiyada madaxa banaan sida uu qabo dastuurka Federaalka ah ee Soomaaliya qodobkiisa 111-aad faqraddiisa labaad .
3: Dhismaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya
Dhismaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda Federaalka ah ee Soomaliya waxaana loo marayaa si waafaqsan dastuurka Federaalka ah ee Soomaaliya.
4: U diyaar garowga iyo qabashada madasha wadatashiga madaxda sare ee dowladda Soomaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Sidii lagu heshiiyay shir madaxeedkii ka dhacay magaalada Muqdisho lixdii bishii labaad ee sanadkan ,waxaa lagu qaban doonaa kulanka madasha wadatashiga madaxda sare magaalada Garowe bishii April ,waxaana la isla gartay in guddiyadii farsamo ee horay la isugu waafaqay ay soo dhamaystiraan taaba galinta howlaha madasha heer qaran.
5: Dhismaha ciidan qaran oo umadda dhan u dhaxeeya.
Si loo dhiso ciidan qaran oo leh sumad qaran ,waxaa la isku afgartay in 300 oo askari loo qoondeeyay Puntland.
6: Dooorka Puntland iyo wada hadalada dowladda Federaalka ah iyo maamulka Somaliland.
Waxaa la soo dhaweeyay sida dowladda Soomaaliya u maamulayso wada hadalka lagula jiro maamulka Somaliland iyo mowqifka ay dowladdu iska taagtay wada hadaladii ugu danbeeyay.
7: Iskaashiga hay’adaha dowladda Federaalka ah iyo dowladda Puntland
Labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen in ay si toos ah iskaashi iyo wada shaqayn buuxda u yeeshaan sida arimaha dastuurka ,qaybsiga deeqaha caalamiga ah, waxbarashada, iskaashiga qorshaha qaranka ,siyaasadda iyo isgaarsiinta qaranka.